(फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति बाट पठाईएको)
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति (फ्रान्सेली: Révolution française [ʁevɔlysjɔ̃ fʁɑ̃sɛːz]) रेभोलुस्योँ फ्रँसेस ; सन् १७८९-१७९९) फ्रान्सको इतिहासको राजनैतिक र सामाजिक उथल-पुथल तथा आमूल परिवर्तनको अवधि थियो जुन १७८९ देखि १७९९ सम्म चलेको थियो। नेपोलियन बोनापार्टले फ्रान्सेली साम्राज्यको विस्तारद्वारा केहि अंशसम्म यस क्रान्तिलाई अधि बढाएका थिए। क्रान्तिको फलस्वरूप राजालाई गद्दीबाट हटाई गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। यस क्रान्तिले आधुनिक इतिहासको दिशा परिवर्तन गरिदिएको थियो। यसबाट विश्वभर निरपेक्ष राजतन्त्रमा ह्रास आउन सुरु भएको थियो।  इतिहासकारहरूले यो क्रान्तिलाई मानव इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना मान्दै आएका छन्। 
१७८९ मे ५ - १७९९ नोबेम्बर ९
क्रान्ति पछीको तीन वर्ष सत्ता कब्जाको लागि सङ्घर्षले भरिपुर्ण भयो, आर्थिक सङ्कट र सामाजिक अव्यवस्था गहरियो। अष्ट्रिया, बेलायत र प्रसिया बाहिरि शक्तिले यस क्रान्तिलाई खतराको रुपमा देखे जसको कारणले अप्रिल १७९२ मा फ्रेन्च क्रान्तिकारी युद्ध सुरु भयो। लूई सह्रौको शासन अन्त्य गरी २२ सेप्टेम्बर १७९२ मा, पहिलो फ्रेन्च गणतन्त्रको स्थापना भयो र जनवरी १७९३ मा राजालाई मृत्युदण्ड दिइयो। जुन मा भएको पेरिस विद्रोहले एसेम्वलीमा अधिपत्य जमाएका जिरोन्दलाई म्याक्समिलन रबस्पियरको नेतृत्वमा रहेको कमिटि अफ पब्लिक सेफ्टीले विस्थापित गर्यो ।
यस क्रान्तिले विश्वव्यापी रूपमा, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको उदयको गतिलाई तिव्रता दियो। यो धेरै आधुनिक राजनैतिक विचारधाराको विकासको केन्द्रिय बिन्दु बन्यो। यसले उदारबाद, पुरातनवाद, राष्ट्रवाद, र धर्म निरपेक्षता र अन्य धेरै राजनैतिक आदर्शहरूको विस्तारको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो। यो क्रान्तिले फ्रान्सका जनता र स्रोतहरूलाई एकक्रित गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको लक्ष्य तर्फ केन्दृत गरी पुर्ण युद्धको उदयको साक्षी समेत बन्यो। यसका केहि केन्दृया दस्तावेजहरु, जस्तै "मानव र नागरिकको अधिकारको घोषणा" ले अर्को दुई शताब्दीसम्म दासप्रथा उन्मुलन आन्दोलन र सर्वजनीन मताधिकार जस्ता आन्दोलनको लागि प्रेरित गर्यो।
फ्रान्समा धेरै पहिलेदेखि निरंकुस शासन चलेको थियो। फ्रान्समा लुई चौधौँ योग्य भए पनि उनका छोरा लुई पन्धौं योग्य थिएनन्। लुई चौधौँको मृत्युपछि सन् १७१५ मा ५ वर्षको उमेरमा लुई पन्धौं गद्दिमा बसेका थिए। उनी अयोग्य, विलासी र अदुरदर्शी थिए। सन् १७७४ मा उनको मृत्यु भएपछी उनका छोरा लुई सोह्रौ २० वर्षको उमेरमा गद्दिमा बसे। यी सबै राजाहरु निरंकुस भएकाले जनताहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि रूपमा शोषित थिए ।
सन् १७८९ मा फ्रान्समा निरंकुस शासन व्यबस्थालाई समाप्त गर्न ठुलो क्रान्ति भयो। उक्त क्रान्तिलाई फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति भनिन्छ ।
राजाका आसेपासे तथा दरबारी ऐसआराम तथा भोगबिलाशमा व्यस्त रहने भएकाले जनताको भलाईमा ध्यान दिदैनथे ।
जनतालाई कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन | कुनै पनि व्यक्तिलाई एक आज्ञापत्र (letter de-cachet) द्वारा कैद गर्न सकिन्थ्यो ।
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ती हुनुमा फ्रान्सको जर्जर हुँदै गइरहेको आर्थिक कारण पनि थियो । मुलुक ऋणको भारले थिचिएको थियो । प्रत्येक वर्षको बजेट कैयौँ करोड घाटा भइ रहेको थियो । यो घाटा पूर्तिको लागि केवल दुईवटा उपाय थिए, नयाँ ऋण लिने या जनतामाथी थप कर लगाउने । सरकारलाई ॠण दिन जनताले पत्याउन छोडिसकेका थिए भने जनताहरू पहिला नै करको बोझले यसरी थिचिएका थिए कि नयाँ कर तिर्ने उनीहरूमा कुनै शक्ति थिएन ।
फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुनु अघि केही अर्थमन्त्रीले फ्रान्सको अर्थतन्त्र सुधारको विभिन्न प्रयास गरेका थिए, जस्तो टुर्गोट, नेकर, केलोन आदि । टुर्गोटले भू-स्वामीलाई पनि समान करको दायरामा ल्याउन चाहे तर सामन्तले यिनको विरोध गरेर रानीसँग यिनलाई हटाउन विन्ती गरे । राजा लुई सोर्हौं रानीको कुरा टाल्न सक्दैनथे परिणाम टुर्गोटलाई राजाले पदबाट हटाए । यिनी पछि नेकर नयाँ अर्थमन्त्री बने । यिनको जोड खर्च कम गर्ने कुरामा थियो । यिनले देशको आर्थिक अवस्था जनतामा प्रस्तुत गरे जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था कती बिध्न नाजुक रहेछ भनेर पहिलो पटक जनताले थाहा पाए । यिनका खर्च कम गर्ने नीतिबाट खर्चालु र विलासी रानी एन्टोनिएट प्रसन्न भइनन् । राजालाई दबाब दिएर नेकरलाई पदबाट हटाउन लगाइन् ।
मन्टेस्क्यु (१६८९-१७५५ ई .) ले आफ्नो पुस्तक 'द स्पिरिट अफ लज' (The Spirit of Laws ) मा राजाको दैवी अधिकारको सिद्धान्तको खण्डन गरे र फ्रान्सेली राजनीतिक संस्थाको आलोचना गरे र त्यसको विकल्प पनि प्रस्तुत गरे । उनले "फ्रान्सेली सरकार निरकुंश सरकार छ किनकी फ्रान्समा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै शक्ति एकै व्यक्ति अर्थात् राजाको हातमा केन्द्रित छ ; त्यसकारण फ्रान्सका जनतालाई स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छैन। " यसै सन्दर्भ मा उनले “शक्तिको पृथकीकरण ” को सिद्धान्त दिए जस अनुसार शासनको तीन प्रमुख अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका को अधिकार अलग-अलग हातमा हुनु पर्ने विचार राखेका थिए । उनले इंग्ल्याण्ड सरकारलाई आदर्श बताए किनकी त्यहां संवैधानिक राजतन्त्र थियो जसमा त्यहां नागरिकलाई स्वतन्त्रता थियो । यस प्रकार मन्टेस्क्युले शक्तिको पृथकीकरणको माध्यमबाट फ्रान्सको निरंकुश राजव्यवस्था माथि प्रहार गरे। उसको यो विचार यती लोकप्रिय भयो कि 'द स्पिरिट अफ लज'को तीन वर्षमा छ संस्करण प्रकाशित भयो ।
भोल्टेयर ( १६९४ - १७७८ ई .) ले आफ्नो पुस्तक, "लेटर्स अन द इंगलिश" आदि, को माध्यमबाट ब्रिटेनमा प्रचलित उदार राजनीति, धर्म र विचारको स्वतन्त्रताको चित्रण गरे तथा पुरातन फ्रान्सेली व्यवस्थासँग तुलना गरे र फ्रान्समा व्याप्त बिकृती एवं कमजोरीको उल्लेख गरे । प्रतिबन्धित हुनुको बाबजुद यो पुस्तक बहुत लोकप्रिय भएको थियो । भोल्टेयरले चर्चको भ्रष्ट अचारण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन र अत्याचारको विरोधमा लेखे । चर्चको भ्रष्टता माथी औंला उठाउदै उनले लेखे "अब कोही पनि ईसाइलाई बचाउन सकिदैन किनकी एक मात्र ईसाई थिए र उसलाई पनि सुलीमा चढाइयो।" उनले थप लेखे "कुख्यात एवं बदनाम चीजलाई खुट्टाले धसिदियौँ।" यो स्पष्ट रूपमा फ्रान्सको निरंकुश राजतन्त्र एवं चर्चको अत्याचारमाथि प्रहार थियो। भोल्टेयर इंग्ल्याण्डको संवैधानिक राजतन्त्रको अनुरूप फ्रान्समा पनि त्यसै अनुसारको शासन स्थापित गर्न चाहन्थे। उनले भनेका थिए "म सयौँ मुसाको स्थानमा एक सिंहको शासन मन पराउँछु ।" भोल्टेयरले क्रान्तिको कुरा गरेनन् तर वैचारिक स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमि तयार गरे ।
दिदेरो आफ्नो वाक्शक्ती र लेखनशक्तिको कारण प्रसिद्ध मानिन्छन् । यिनले सम्पादन गरेको इन्साइक्लोपेडियामा दासप्रथा, शासनको भ्रष्टता, निरंकुश शासन, सामन्तप्रथा, समाजका विभिन्न वर्ग तथा फौजदारी कानुन बारे लेखिएको थियो जुन पुस्तक फ्रान्समा बहुत रुचाइयो ।
स्टेट जनरल बैठकसम्पादन
स्टेट जनरलको स्थापना राजा फिलिपद्वारा सन् १३०४ मा भएको थियो । सन् १६१४ सम्म यसको अधिवेशन नियमित जस्तो भइरहेको थियो, तर १७५ वर्षदेखी भने कुनै अधिवेशन भएको थिएन । निर्वाचन १७८९ को बसन्त ऋतुमा भयो। साधारण वर्गको लागि मतदानको योग्यता भनेको फ्रान्समा जन्मेको वा वंशज नागरिक पुरुष; उमेर २५ वर्ष वा सो भन्दा बढी, जो मतदान हुने स्थानमा बसोबास गरेको र कर टेर्ने गरेको थिए । स्टेट जनरलमा कुलीन वर्गका २९१, उच्च पादरी वर्गका ३०३ र साधारण वर्गका ६१० गरी १२०१ प्रतिनिधि थिए । साधारण वर्गको प्रतिनिधित्व दोब्बर गरी ६१० पुर्याइएको थियो जसले ९५ % जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो; ती मध्ये आधा सुशिक्षित वकिल तथा स्थानीय अधिकारी थिए; करिब एक तिहाइ उद्योग व्यापार व्यवसाय मा सम्बद्ध थिए भने ५१ जना धनी जमिनदारहरू थिए । 
स्टेट जनरलमा तीन सदनहरु थिए जसमा कुलीन वर्ग, उच्च पादरी वर्ग र साधारण वर्ग थिए । हरेक सदन बराबर एक मत मान्ने गरिन्थ्यो र जुनसुकै प्रस्ताव दुई मत भएपछी पारित हुन्थ्यो तर यहाँ साधारण वर्गले जनताको भलाईको लागि लिएर जाने जुनसुकै प्रस्ताव पनि कुलीन वर्ग र उच्च पादरी वर्ग मिलेर त्यसलाई असफल पारिदिन्थे ।
राजाले भर्साइल स्टेट जनरलका ३ वटै तप्का कुलिन वर्ग, पुरोहित वर्ग र सामान्य जनाताका प्रतिनिधीहरूसँग "राष्ट्रको आर्थिक संकटको समाधान गर्ने उपाय खोज्न चाहन्थे । उनको उक्त भर्साइल स्टेट जनरलका बैठकमा प्रस्तावित एजेण्डाहरु मध्यको प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रमाथिको बढेको ऋणलाई कसरी चुक्ता गर्ने ? र अर्थ व्यवस्था कसरी सुदृढ गर्ने ?" भन्ने थियो ।
उक्त वैठकमा सामान्य जनताका प्रतिनिधिहरु नै लगभग एघार सयको संख्यामा भएकाले उक्त आर्थिक संकटका विरुद्ध, राजा विरुद्ध बढी नै आक्रोशित भए । सामान्य जनताका वकिल र वुद्धिजीवी प्रतिनिधिहरूले राजाका विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै जनताका आवाज उठाएका थिए । ४ मे १७८९ मा सुरु भएको स्टेट जनरलको बैठकमा लगभग २ महिना बहस भएको थियो ।
साधारण वर्गका प्रतिनिधिले स्टेट्स जनरलका सम्पूर्ण प्रतिनिधिको बैठक बेग्ला बेग्लै नगरी संयुक्त रूपमा एकै सभा भवनमा गरिनु पर्ने र संयुक्त प्रतिनिधिको बहुमतद्वारा कुनै पनि निर्णय पारित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए किनकी यसले मान्यता पाउनासाथ स्टेट्स् जनरलमा उनीहरूको बहुमत हुने थियो । यसको खतरा प्रथम र द्वितीय वर्गका कुलीन र पादरी वर्गलाई राम्रोसँगले थाहा थियो, त्यसैले उनीहरूले यो कुराको कडा विरोध गरे । र पहिला झैं तीन सदनमा दुई सदनको मत पाएर प्रस्ताव पास गर्ने कुरामा जोड दिन थाले । लगभग महिना दिन सम्म यसको बारेमा छलफल भयो । जून ३ मा पादरीवर्गका तीन सदस्य साधारण वर्गमा मिल्न गए र साधरण वर्गका प्रतिनिधिहरूले १७ जून १७८९ मा राष्ट्रिय सभा (National Assembly)को निर्माण गर्ने घोषणा गरे । जुन अत्याधिक मतले पास भयो । उनीहरूको राष्ट्रिय सभाको स्थापना गरेर फ्रान्समा सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा भयो ।
टेनिस कोर्टको सपथसम्पादन
अर्थमन्त्री नेकरको बर्खास्तसम्पादन
बेस्टाइललाई जनसमूहले घेरेपछी भीषण भिडन्त भयो । बेस्टाइल किल्लाका गभर्नर डि लानी थिए । डि लानीले आफ्नो गोलाबारुद सकिएपछी आत्मसमर्पण गरे तर डि लानी र उनका सैनिक जनताद्वारा मारिए । बेस्टाइलको किल्ला ध्वस्त गरेर राजबन्दीलाई मुक्त गरियो ।
राजा र जनताका बीचमा यस क्रममा नै सहर र ग्रामिण क्षेत्रका विभिन्न इलाकाहरूमा भिषण सङ्घर्ष भयो । राजा उक्त सङ्घर्षमा पराजित हुदै जान थाले पछि वर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनःस्थापना गर्दै जनता समक्ष माफी माग्दै उक्त क्रान्तिलाई मान्यता दिन वाध्य भए । कुलिन वर्ग र पादरी वर्गका प्रतिनिधिहरूले समेत जनताका प्रतिनिधिहरूलाई समर्थन गर्न वाध्य भएका थिए । उक्त क्रान्ति मार्फत राजतन्त्र समाप्त भयो र केही समय पछि राजालाई माफ माग्न लगाएर संवैधानिक राजाको रूपमा पुनःस्थापना गराए । सहर र ग्रामिण क्षेत्रका विभिन्न इलाकाहरूमा विभिन्न कम्युन निर्माण गरिए र उक्त कम्युनहरूको एउटा छाता सङ्गठन फेडेरेसन बनाइयो ।
क्रान्तिको विभिन्न चरणहरूसम्पादन
'आतंकको राज्य' स्थापनाको साथ फ्रान्स फेरी एक पटक पुनः अव्यवस्थाको शिकार भयो। म्याक्समिलन रबस्पियरको नेतृत्वमा यसको स्थापना भएको थियो । यसमा क्रान्तिकारी, जनसुरक्षाको स्थापना गरिएको थियो र जो कोहीले ज्याकाबिन्सको विरूद्ध काम गर्थ्यो उसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्थ्यो । रबस्पियर रूसोको विचारधाराबाट निकै प्रभावित थिए । जस अनुसार “सामान्य इच्छा” (जनरल विल) नै सार्वभौमिक इच्छा हो। रबस्पियरले सत्तामा नियन्त्रण राख्नको लागि विरोधीहरूलाई “जिलेटिन/ गिलेटिन” (फाँसी)मा शीर छेदन गरे। अतः सबै व्यक्ति आफ्नो जीवनको आयु कती होला भनेर सशंकित रहन्थे ।
१७९३ मा एउटा प्रस्ताव पास गरेर जेकोबिनद्वारा जिरोन्दिस्टका नेतालाई कन्भेन्सनबाट निकालिएको थियो जसको दक्षिण फ्रान्समा भयङ्कर विरोध भयो तर त्यसलाई क्रुरतापुर्वक दवाइयो । यस्तै लिऔं शहरका बासिन्दाले विद्रोह गर्दा कन्भेन्सनले यसको पनि कठोरतापूर्वक दमन गर्‍यो । यो दमनमा विशाल सैनिक शक्तिको प्रयोग गरियो । सामन्तका घरहरु नष्ट गरिए । ३,५०० भन्दा बढी समाइए र लगभग २,००० जनालाई मारियो ।
बेन्दी जिरोन्दिस्ट दल तथा राजतन्त्रवादीहरूको आँखाडा थियो । यो शहरका बासिन्दाले गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह गरे। यहाँ कन्भेन्सनले केरियार नामक व्यक्तीलाई दमनको लागि पठायो । यिनले क्रुरताको परिचय दिए। मानिसलाई लाईनमा राखेर गोली ठोकियो र आइमाई, केटाकेटीलाई नदिमा बगाइयो ।
अन्ततः जुलाई १७९४, मा रबस्पियरलाई कैद गरियो र फाँसी दिइयो । यसैको साथ साथ आंतकको राज्य पनि समाप्ति भयो।
नेशनल कन्भेन्सनको कार्य
तृतीय चरण /“डाइरेक्टरी” शासन (१७९५-१७९९)सम्पादन
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी युद्धसम्पादन
संसारलाई प्रजातन्त्र पाठ सिकाउदै मानवता, स्वतन्त्रता र समानताको नारा दिई प्रजातान्त्रिक आदर्शको घोषणाफ्रान्सेली क्रान्तिको प्रेरक शब्दहरू -स्वतन्त्रता, समानता र बंधुत्व। यी तीन शब्दले विश्वको राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपमा आमूलचूल परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्यो । जस प्रकार धर्म र संस्कृतिको क्षेत्रमा सत्यम् शिवम् र सुन्दरमको महत्त्व छ उसैप्रकार राजव्यवस्थामा स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व भावना धेरै देशको संविधानमा देखिन्छ ।
फ्रान्सेली क्रान्तिको प्रकृतिसम्पादन
क्रान्तिको मध्यवर्गीय स्वरूपसम्पादन
क्रान्ति सुनियोजित थिएनसम्पादन
'सामाजिक क्रान्ति'को रूपमासम्पादन
प्रगतिशील क्रान्तिको रूपमासम्पादन
↑ १९.० १९.१ Doyle (1989), p. 320
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=फ्रान्सेली_राज्यक्रान्ति&oldid=1029717" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३० जुलाई २०२१, ०७:५७
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०७:५७, ३० जुलाई २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।